NOSY MALAGASY SY « FRANCOPHONIE » - Tout pour la restitution des îles malagasy
Nilaza izahay teto omaly fa fena dodona sy maika ary tsy maharay lamba mihitsy ny mpitondra mikarakara ny fandraisana ireo vahiny hamonjy ny fivorian’ny « francophonie » izay hatao eto amintsika amin’ity taona ity. Misy voninahitra sy volabe an-tapitrisany maro kirakiraina amin’izany kanefa ny firenena tena ao anatin’ny fahasahirana tanteraka ary efa eo an-tokonana ny KERE na ny tsy fahampian-tsakafo any atsimon’i Madagasikara, ireo mpanjono any amorontsika tsy afaka manjono ao amin’ny fari-dranomasina malagasy ao amin’ny Canal de Mozambique. Eo ny fananganana foto-drafitr’asa isan-tokony sy ny kajikajin’ny vitsy an’isa mahita tombom-barotra amin’izany fivoriana izany saingy tsy tokony variana amin’izany hetsika mandalo izay tsy miteraka fampandrosoana ho an’ny firenena izany isika ka hanao an-kilabao ny fangatahana ny famerenana ireo Nosy malagasy. Raha sanatria izany no mitranga dia azo heverina fa diso fandray fanampahan-kevitra ny mpitondra fanjakana malagasy sy ny vahoaka jiaby amin’ny fitakiana ireo Nosy malagasy. Inona no antony hilazanay izany ?
AMIN’IO FOTOANA IO NO HANGATAHANA NY « ILES EPARSES »
Araka ny fantatra dia amin’io fivorian’ny « francophonie » io no hangatahan’ny fitondram-panjakana malagasy amin’ny fomba ofisialy ireo Nosy malagasy ireo. Azo heverina fa tara loatra izany satria raha ny fivoaran’ny toe-draharaha eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena izay nambaranay teto dia tokony alohan’io fivoriana io isika no mampiseho amin’izao tontolo izao ny fahavononan’ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy hitaky ny famerenana ireo Nosy ireo amin’ny fomba milamina.
Azo ambara fa raha vao foanan’ny fitondram-panjakana frantsay ny « décret n°60-555 du 1er avril 1960 » sy ny « Décret n°78-146 du 3 février 1978 » dia miravona ny raharaha ary ho entina eo anivon’ny Firenena mikambana fotsiny ny fifanarahana vita teo amin’ny firenena roa tonta. Izany indrindra no antony nanaovanay antso avo tamin’ireo solombavam-bahoaka nandritra ny famelabelaran-kevitra nataonay tamin’ny 18 desambra 2015 teo anivon’ny Lapan’ny Antenimieram-pirenena mba hiaraka hientana amin’ny vahoaka malagasy izy ireo amin’ny fitakiana ampilaminana (d’une manière pacifique) ireo Nosy malagasy ka hiroso amin’ny famolavolana taratasy iray izay halefa amin’Andriamatoa Filohan’ny Antenimieram-pirenena frantsay sy ireo solombavam-bahoaka mpikambana ao amin’ny « amitié franco-malgache » mangataka ny fanafoanana an’ireo « décrets » miisa roa voalaza etsy ambony. Handefasana kopian’izany taratasy izany Andriamatoa isany Sekretera Jeneralin’ny Firenena Mikambana, ny Filoham-pirenena malagasy sy frantsay, ny Praiminisitra sady Lehiben’ny governemanta malagasy sy frantsay. Hatao teny ierana amin’ny vahoaka malagasy eo amin’ny kianjaben’i Mahamasina izany.
METY HO DISO KAJY ISIKA MALAGASY
Raha tsy mihofahofa any amin’ireo Nosy malagasy ny sainam-pirenena malagasy alohan’ny fivorian’ny « francophonie » amin’ity taona 2016 ity dia ho sarotra ny raharaha ary hialangalana ireo firenena vonona amin’ny fanohanana an’i Madagasikara. Inona no antony ?
Efa vita kajy mialoha ny teti-panorina ho an’ny fanjakana frantsay satria raha tokony amin’ny faran’ny taona 2017 vao tokony ho tonga ao La Réunion ilay sambo an’ny tafika an-dranomasina frantsay dia naroso amin’ny fiandohan’ny taona 2017, izany hoe raha vao vita ny fivorian’ny « francophonie ». Io sambo na « bâtiment multi-missions (B2M) » dia natao hanara-maso sy hiaro ny fari-dranomasina frantsay aty amin’ny Canal de Mozambique ary hamatsy ireo miaramila frantsay mipetraka any amin’ireo îles éparses (Afin d’assurer pleinement la surveillance des zones économiques exclusives (ZEE) des terres australes, le ravitaillement des militaires installés dans les îles éparses et la protection des intérêts nationaux dans le canal de Mozambique).
Mila mailo isika satria efa nanomboka tamin’ny 2014 no tsy afaka nanjono toy teo aloha (1892 – 2014) tao amin’ny fari-dranomasina malagasy ao amin’ny Canal de Mozambique ireo mpanjono nentim-paharazana izay mamelona olona an-tapitrisany amin’ny ilany avaratra sy andrefana ary atsimon’i Madagasikara.
Mety hiteraka hetsi-bahoaka goavana ary tsy hay ho tohaina izany manoloana ny korontana ara-tsosialy, ny tsy fisian’ny fandriampahalemana, ny fahantrana miha lalim-paka isam-pianakaviana manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, ny fanondranana an-tsokosoko ireo harem-pirenena sy ny raharam-panjakana izay tena anjakan’ny kolikoly avo lenta sy ny tsindry isa-tokony ka manapotika tanteraka ny toe-karem-pirenena.
Izany rehetra izany dia miteraka fahatezerana amin’ny vahoaka maro an’isa. MILOKO MENA ny toe-draharaha rehetra eto Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ka mitaky ny fanovana ny toe-tsaina sy ny rafitra ary fametrahana olom-baovao manana vinam-piaraha-monina mifototra amin’ny fokonolona sy ny soatoavina malagasy ary ny toe-karena tsy miankin-doha. Io ilay lesona sy enti-mody ho an’ny fitondram-panjakana izay nampitain’izao tontolo ho an’ny fitondram-panjakana sy vahoaka malagasy tamin’ny alalan’ny Ambasadaoro avy any Maroc sady sojaben’ireo Masoivoho vahiny miasa sy monina eto amintsika tamin’ny fifampirahabana tratry taona teny amin’ny Lapam-panjakana any atsimondrano tamin’ny 8 janoary 2016.
Enga anie ka tsy ho diso fandray fanampahan-kevitra ny fitondram-panjakana ka sanatria ho zary lasa nofinofy toy tamin’ny fanomanana ny fivoriamben’ny OUA tamin’ny 2007-2008 ity fivorian’ny « francophonie » izay teren-ko masaka toy ny voalobo-jaza ity.